Canada Myanmar: August 2009
မြန်မာနိုင်ငံသို့တိုးရစ် များ သွားခြင်း
မြန်မာပြည်သို့ သွားရောက်လည်ပတ် ကြမည့် တိုးရစ်များအတွက် Video Click ဒီမှာနိပ်ပါ
This is notagood time to visit Burma
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 8:55 a.m. No comments: Links to this post
Canada sends 13 to Myanmar
http://www.thestarp hoenix.com/ news/Ottawa+ sends+Myanmar/ 1903687/story. html
Saskatoon man avoids same fate as other claimants
By Jason Warick, Saskatchewan News Network August 18, 2009 8:43 AM
Saskatoon resident Nay Myo Hein was able to avoid deportation to Myanmar during the weekend due toalast-minute intervention byapair of federal government ministers, but more thanadozen others have not been so fortunate.
Responding toaStarPhoenix request made on Thursday, an official with the Canadian Border Services Agency said 13 refugee claimants during the past five years have been deported to Myanmar, also known as Burma.
Public Safety Minister Peter Van Loan said in an e-mail Mondayablanket suspension of deportations to Burma is "not warranted."
The number alarmed the group Canadian Friends of Burma (CFOB), which was not aware anyone was being sent back to live underamilitary regime repeatedly condemned by Canada and other nations.
"We had no idea. Hearing that is quite shocking, quite disturbing," CFOB board member Kevin McLeod said in an interview.
"We don't think anyone should be deported to Burma. It is an arbitrary, unfair place."
Last week, Prime Minister Stephen Harper had harsh words for Myanmar's leaders after opposition leader and Nobel Prize laureate Aung San Suu Kyi was sentenced to another 18 months of house arrest.
"Canada is appalled by the ongoing repressive actions of the Burmese regime and its continued disregard for the fundamental freedoms and basic human rights of the people of Burma. We have imposed the toughest sanctions in the entire world against the regime to protest its treatment of its people," Harper said in an Aug. 11 statement.
"We will continue to stand with the people of Burma and insist that their human rights be respected and their voices heard."
That position was repeated inaStarPhoenix interview Sunday with Citizenship, Immigration and Multiculturalism Minister Jason Kenney. Kenney said it would not be safe to send Hein back to Burma, in part because of the large amounts of publicity the case generated. The regime may have taken note and targeted him because of it, Kenney said.
McLeod said the CFOB is grateful to Kenney and Van Loan for their intervention Saturday to save Hein from deportation. The CFOB, Amnesty International' s Canadian section and others believed Hein would have been jailed, tortured or executed if returned.
But McLeod wonders how the Canadian government could have deported the 13 other people.
"These people need protection," McLeod said.
McLeod would like to know if the Canadian Border Services Agency or any Canadian official is following up to ensure these 13 people are safe. Canada has no embassy in Myanmar. The closest Canadian ambassador is in Thailand and has been barred from entering Myanmar in the past, McLeod said.
Van Loan, whose responsibilities include the Canadian Border Services Agency, said in his e-mail the Canadian government "has been clear and consistent in condemning the Burmese regime for its repressive actions."
Van Loan said the issue of deportation to Myanmar "is always under consideration, " but there are no current plans to place the country on Canada's "temporary suspension of removals" list.
"There are many situations where potential political persecution is notarisk. As such,ablanket temporary suspension of removals is not warranted," Van Loan said.
"While removal of some individuals to Burma would be unsafe, those cases can be dealt with on an individual basis."
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 11:33 a.m. No comments: Links to this post
Predictable Injustice for Suu Kyi
To the surprise of no one, on August 11, 2009, Judges Thaung Nyunt and Nyi Nyi Soe found Daw Aung San Suu Kyi, Burmese opposition leader and Nobel Peace laureate, guilty of violating the terms of her house arrest. They immediately sentenced her and her two companions to three years hard labour. There have been no reports indicating whether sentencing submissions were made to the judges before the decision was reached.
Read more..... at
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 4:51 p.m. No comments: Links to this post
Thailand, as the ASEAN Chair, has learned with deep disappointment that Daw Aung San Suu Kyi was sentenced to serve eighteen months of house confinement with limited freedom. The Chair wishes to reiterate the calls made by the ASEAN Foreign Ministers attending the 42
nd ASEAN Foreign Ministers’ Meeting and the 16th ASEAN Regional Forum held in July 2009 in Phuket, for the immediate release of all those under detention, including Daw Aung San Suu Kyi, withaview to enabling them to participate in the 2010 General Elections.
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 11:24 a.m. No comments: Links to this post
တိုရန်တို့ မြို့၂၁ ကြိမ်မြောက် ၈၈၈၈ လုပ်ရှားမှူ များ
၂၁ ကြိမ်မြောက် ၈၈၈၈ လှုပ်ရှားမှူ များ ( တိုရန်တို - ကနေဒါ )
Burma VJ Theatrical Opening & 21 anniversary of 8888 in Toronto
မြန်မာ့VJ ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ဖွင့် ပွဲ နှင့်၂၁ နှစ် မြောက် ရှစ်လေးလုံး လှုပ်ရှားမှူများ
Burma VJ ရုပ်ရှင် ပွဲ ဖွင့် ပွဲ အခမ်းအနားကို သြဂုတ် လ ၇ ရက်နေ့ က စတင်ပြီး
ဖွင့် လှစ် ရုံတင်ပြသခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ် ။ ရုပ်ရှင်မစခင်မှာ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှား
မှူ့ များကို ထောက်ခံ အားပေးကြောင်းနဲ့ကနေဒါ နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးကို တိုက်
ရိုက်စာရေးတောင်းဆိုစာများကို ပရိသတ်များထံမှ လက်မှတ်ရေးထိုးကောက်ခံပြီး မြန့် 
ရုပ်ရှင် ပြပွဲ ပြီးတဲ့ အခါမှာ တော့ရုပ်ရှင်ကြည့် ပရိသတ်များထံမှ အမေးခွန်းများကို ပွဲ
ဖွင့် ပွဲ နေ့မှာ ကို ဇော်ဇော် က တာဝန်ယူ ဖြေကြားပေးသွားပါတယ် ၊ ပွဲ ရဲ့ ဒုတိယနေ့ 
သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့ မှာတော့တိုရန်တိုမြို့ မှာရှိသော မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူ အဖွဲ့ 
အစည်း ပေါင်းစုံ စုပေါင်းပါဝင် ပြီး ထိုရုပ်ရှင်ရုံ ရှေ့ မှာပဲ ရှစ်လေးလုံး အခန်းအနားကို ကျင်း
ပပြုလုပ်ကြပါတယ်။ ရုပ်ရှင်အပြီးမှာတော့ အမေးဖြေများကို ကိုကျော်ဇောဝေ ၊ ဦးပဇင်း ဦး
နန္ဒ၀န်သ နှင့် လူအခွင့် ရေး အဖွဲ့ မှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ဖြေကြားကြပါတယ် ။ ထိုရုပ်ရှင်ပွဲ
တော်ကို ၁၃ ရက်နေ့ အထိ မြို့ လည်ခေါင်ရှိ The Royal Theater မှာ ပြသသွားမှာဖြစ်
တဲ့ အပြင် ရှုပ်ရှင် ပြပွဲအပြီးများမှာလည်း ၉ ရက်နေ့ တွင် ကိုဝင်းမောင် ၁၀ ရက်နေ့ တွင်
ကိုအောင်တင် ၊ ၁၁ ရက်နေ့ တွင် ကိုဇော်ဇော် ၊ ၁၂ ရက်နေ့ တွင် ကိုမျိုးသိန်းနှင့် ၁၃ ရက်
နေ့ တွင် ကိုကျော်ဇောဝေ တို့ မှ ရုပ်ရှင်ကြည့် ပရိသတ်များထံမှ အမေးအဖြေများကို ထိုရုပ်
ရှင် ရုံထဲတွင်ပင် ဖြေကြားသွားမှာဖြစ်သည့် အကြာင်း သိရပါသည် ။
ထို အခမ်းအနား ကို ပါဝင်ပူးကြသည့် အဖွဲ့ အစည်းများနှင့်တာဝန်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း
Burma VJ Theatrical Opening & 21 anniversary of 8888 in Toronto Video Click ဒီမှာနိပ်ပါ
ပါဝင် ပူးပေါင်း လက်တွဲကြသော အဖွဲ့ အစည်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ကြပါသည်။
Arakanese Canadian Society (Toronto)
United Democratic Youth League (Canada Branch)
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 5:30 p.m. No comments: Links to this post
ငကန်း သေတော့ 
င စွေ ပေါ် ၏ ။
ငကျော် ပြေး က
ငအေး လာ၏ ။ ။
ငသောင်း ကျန်၏ ။
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 2:54 a.m. No comments: Links to this post
8888 Statement BSDO
၂၁ နှစ် မြောက် ရှစ်လေးလုံးနေ့ ထုတ်ပြန်ကြော်ငြာချက်
ယနေ့ သည် မြန်မာတနိုင်ငံလုံး ၏ ကြီး မားသော သမိုင်း တ ကွေ့ ဖြစ် ခဲ့ သည့် 
ရှစ် လေး လုံးအ ရေး တော်ပုံ ကြီး ဖြစ် ပေါ်လာခဲ့ သည်မှာ ၂၂ နှစ်သို့ ပင် တိုင်ခဲ့ ပြီ ဖြစ်
သို့ သော် ပြည်တွင်း ပြည်ပ တော်လှန်ရေး အင်အားစုများကြိုးပန်းနေကြသည့်မြန်မာတိုင်းရင်းသား ပြည်သူတရပ်လုံး အတွက်အစစ်မှန်သော ဒီမိုကရက်တစ် အစိုး ရ
တရပ် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ ခြင်း မရှိသေး သည့် အပြင် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ၊ အမျိုးသား
ပြန်လည် သင့် မြတ်ရေး နှင့် မြန့် မာ့ ဒီမိုကရေစီ အရေး တို့ ကို ငြိမ်းချမ်းစွာလုပ် ဆောင်
လျှက်ရှိကြသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် တိုင်းသားခေါင်းဆောင်များ ကျောင်းသား
ခေါင်းဆောင်များစသည့် ပြည်တွင်းအတိုက်အခံအင်အား စုများအားလုံးကိုပိုမိုဖိနိပ်ညှင်း
ပန်း လျှက် ရှိနေသေးသည်မှာ အထင်အရှားဖြစ်သည် ။
ထို့ကြောင့် မြန်မာကျောင်းသားတို့ ၏သမိုင်းအစည်အလာအတိုင်းအသက်သွေး ချွေးတို့ ကို ပေး ဆပ် ၍ အစတေး ခံ လူတန်း စား ၊ အဖြည့် ခံ လူတန်းစား တော် လှန် ရေး ၏ အောက်ခြေ လူတန်းစား တရပ်အနေနှင့်ပြည်သူ တို့ ၏ ရှေ့ ၊စစ်မှန် သောနိုင် ငံ ချစ် ခေါင်း ဆောင်များ၏အရှေ့မှထာဝရ ဖြည့် ဆည်း ရပ်တည် အနစ် နာခံ လျှက် ရ
ရာ သင့် ရာနည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် ဆက်လက်ပြတ်သားရဲဝန့် စွာ ဒီမို ကရေစီ အောင်ပွဲရ
သည် အထိ တိုက်ပွဲဝင်သွားကြမည် ဖြစ်သည့် အပြင်မြန်မာစစ်အစိုးရအားအောက်ပါအချက်အလက်များကိုတောင်းဆိုလိုက်သည် ။ ။
( ၁ ) မတရား အကွက်ဆင် အနိုင်ကျင့် ချုပ်နှောင်ဖမ်းဆီးထားသော လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ် အောင်
ဆန်းစုကြည် အား ချွင်းချက်မရှိ ပြန်လွတ်ပေး ရန်
( ၂ ) မတရား ဖမ်း ဆီး နိပ်စက် ခံနေ ကြ ရသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်း သားများ ၊ ရဟန်း သံဃာတော်
များတိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များကို ချွင်းချက်မရှိပြန်လွတ်ပေးရန်
( ၃ ) ၁၉၉၀ ခု ပြည်သူ မှ ရွေး ချယ်တင်မြှောက်ထား သော NLD ပါတီနှင့် ပြည်သူ့ ကိုယ် စားလှယ်
များအား အာဏာ လွဲပြောင်း ပေး ရန်
( ၄ ) တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ ၊ ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်များ ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ ခေါင်းဆောင်
အသိပညာ ရှင် အတပ်ပညာ ရှင်များပါဝင်သည့် စစ်မှန်သော ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေ
ကို ရေးဆွဲရာ ဉ် စစ်တပ် သည် တိုင်းပြည်၏ လုံ ချုံ ရေး ကိုသာ တာဝန်ယူပေးရန်စသည့် တိုင်း
ပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အခြေခံ ၄ ချက်ကို တောင်းဆိုလိုက်သည်..။
BSDO ( Toronto )
62 Hickson Street , Toronto , M6K 1T3
Tel: (416) 605 8765 , (416) 653 7702 Fax (416) 533-1906
Email: bsdo.toronto@gmail.com Website: http://bsdocanada.blogspot.com/
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 3:57 a.m. No comments: Links to this post
တိုရန်တို့ မြို့၂၁ ကြိမ်မြောက် ၈၈၈၈ လုပ်ရှားမှူ မ...